I-Semalt: Izinhlobo Zokugaxekile Ama-imeyili Ne-Spam Amazwana Ongayithola
Kuphephile ukuphawula ukuthi abangama-webmasters abangaphezu kuka-92% nabakhulogi bekhathele ngama-imeyili ogaxekile namazwana ogaxekile. Ngesinye isikhathi abantu abavumelene ukuthola amaphephandaba, esikhundleni salokho baqala ukuthola ama-imeyili angenamsoco namazwana ogaxekile nxazonke. Ukubhekana nalezi zinkinga ezimbili kungenzeka kuphela uma wazi konke mayelana nezinhlobo zabo. Lapha, uMichael Brown, Semalt uMenenja weNtuthuko YeKhasimende, usho izinhlobo ezahlukene zama-imeyili ogaxekile namazwana ogaxekile ongayithola ngaso sonke isikhathi.
I-Social Media Expert Spam:
Ochwepheshe bezokuxhumana bezenhlalo nabathengisi be-intanethi bayazi ukuthi i-spam yezokuxhumana yomphakathi iyinkinga enkulu yamabhizinisi ahlukahlukene kanye nemikhiqizo kwi-intanethi - calculateur de paie en ligne. Ngesikhathi umatasa ngokukhushulwa kwemikhiqizo yakho namasevisi kuma-social media ikakhulukazi i-Facebook ne-Twitter, ungase uhlaselwe ugaxekile. Abezindaba bezokuhlambalaza nabaduni bafuna ukwazi konke mayelana nekheli lakho le-imeyili kanye newebhusayithi. Bese basebenzisa lolu lwazi ukukuthumela imilayezo engavamile noma ushiye amazwana acasulayo kubhulogi yakho; konke lokhu kungenzeka ukwenza ngokusebenzisa izingosi zomphakathi.
I-Lucky Winner Spam:
Ugaxekile onqobayo inhlanhla kwenzeka lapho abantu bekhalaza ngokunganqoli noma yimaphi imiklomelo kwi-intanethi. Ngokwesibonelo, uma udlala imidlalo yevidiyo noma usebenzise inamba yezinhlelo zokusebenza ku-intanethi, ungafuna ukunqoba umklomelo wesikhwama noma izaphulelo ukuthenga ku-intanethi. Yilapho i-spam eyinqola eyinqola eqala khona; abaduni bazi ukuthi yiziphi abasebenzisi abanesithakazelo ekuwuneni okuthile nokuzikhandla ngezinto ezibizwa ngokuthi ama-amazing and deals.
I-Dream Job Spam:
Lena enye uhlobo lwe-imeyli ogaxekile kanye nokuphawula kogaxekile okungabangela izinkinga. Abasebenzisi abafuna ukuthola umsebenzi wephupho ngesikhathi esithile, ngokuvamile bagijimelwa abakwa-spammers, futhi baqala ukuthola imiyalezo engadingeki ngaso sonke isikhathi. Futhi, abangu-blogger abavele basebenze amabhulogi abo noma amawebhusayithi bangase babe izisulu zogaxekile lomsebenzi wephupho njengoba abakwa-spammers bengawafake nge-short-cuts ukuze baphumelele. Akuphephile ukuxhumana nabantu ongamazi lutho. Ukuze uqinisekise ukuphepha kwakho, akufanele nanini uhlanganyele i-URL yakho yebhulogi noma ikheli le-imeyili nomuntu ongaziwayo.
I-iPad Egaxekile yamahhala:
Uma othile ekunika amasevisi wamahhala we-iPad, amathuba ukuthi ufuna ukukukhohlisa futhi angase akhombe imininingwane yakho ebucayi. Lokhu kugaxekile kudlulisela labo abangenalo ukuqonda okuyisisekelo nokuthuthukisiwe kwe-intanethi. Wonke ama-imeyili namazwana asho ukuthi uwunqobe i-iPads yamahhala ayizinhle. Akufanele neze uvule okunamathiselwe kwawo futhi ufunde imilayezo yabo ngoba abagaxekile bazofaka umshini wakho nge-malware noma amagciwane.
Ugaxekile Wokulahlekelwa Isisindo:
Ukukhuluphala kungenye yezinkinga ezinkulu kwi-intanethi, futhi abantu abaningi bafuna ukuchitha amakhilogremu engeziwe ngokushesha. Ngeshwa, asikho isinqamuleli kuso, futhi kuzodingeka usebenze kanzima ngempela. Labo abathi bangakwazi ukulahlekelwa isisindo ngesikhathi nhlobo empeleni abagaxekile. Bangashiya izixhumanisi babuyele kumasayithi abo enonya kusigaba sakho sokuphawula noma bangakuthumela ama-imeyili amaningi ogaxekile njalo. Kufanele uqaphele ngenkathi wabelana ngemininingwane yakho yomuntu nanoma ubani ngoba iningi labantu ku-inthanethi libaduni.